Ny androaniko | Jiona 2008
[Ankapobeny ] 27 Jiona, 2008 21:25
Hafaliana tsy omby tratra.
Vita soa ny fandidiana an'i Kamba kely : misaotra anareo rehetra rehetra.
Faly loatra aho ka nijoy kely ny ranomasoko teo avy niantso ny rahavaviko isan'ny mikarakara mafy azy ao amin'ny hopitaly Ravoahangy-Andrianavalona.
Lava dia lava ny andron'izy ireo androany izay. Tamin'ny 8 ora sy sasany maraina izy dia efa niditra trano fiandrasana mialoha ny fandidiana, nokarakaraina nasiana ny kojakoja rehetra hiatrehana izany.
Tamin'ny mitataovovonana ka hatramin'ny 8 ora alina teo no nikatroka ny fandidiana i Pr Clément Andriamamonjy sy ny ekipany.
Efa nifoha i boay kely bôgôsy tamin'izaho niantso tamin'ny 10 ora alina (amin'ny 11 ora alina any Madagasikara). Mitaraindraina izy ao = fambara tsara.
Tsy vita eo anefa ny ezaka, mbola mitohy ny fanotronana azy hiatrika ny aorian'ny fandidiana - mba tsy hisy fahasarotana ny fihidin'ny fery.
Mirary azy hahita fahasitranana haingana sy hitombo fahasalamana hatrany.
Mbola mamerina fisaorana eram-po eran-tsaina ireo namana sy tapaka tsy ary ho tanisaina eto fa maro tokoa ianareo no nanohina ny antso na tamin'ny lafiny ara-bola na tamin'ny lafiny ara-tsaina. Fitiavana daholo izany. Misaotra misaotra.
[Ankapobeny ] 25 Jiona, 2008 21:31
Tratry ny asaramanitra jiaby ! (Updated - doty tsisy kadou)
(tsss, efa hivalona ny 26 jiona vao tafitan'ny Kilonjy aty aminay ny fiarahabana...)
[Hira ] 19 Jiona, 2008 09:10
...dia firy sy iza avy daholo indray izao no tsy nanome litika ny ray sy reniny tamin'ity hira ity ???
[Ankapobeny ] 13 Jiona, 2008 19:56
manaraka ny toe-tr'andro...